एमाले–माओवादी एकता चैत २० मा, कति सम्भव ? – Makalukhabar.com
एमाले–माओवादी एकता चैत २० मा, कति सम्भव ?
काठमाडौं, चैत १२ । नेकपा(एमाले) र माओवादी केन्द्रबिचको पार्टी एकता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएको दिन अर्थात वैशाख ९ गते गर्ने भनिएपनि तत्काल पार्टी एकता गर्ने आन्तरिक तयारी भएको बुझिएको छ ।
स्रोतका अनुसार एमाले र माओवादी चैत २० गते एकीकरण घोषणा गर्ने तयारीमा छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत भ्रमणमा जानु अघि नै पार्टी एकता गर्ने चाहना राखेपछि त्यसै अनुसार तयारी तिब्र पारिएको छ । दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणमा जाँदा एकीकृत पार्टीका अध्यक्षका हैसियतले पनि प्रस्तुत हुने मनशाय देखाएपछि सोहीअनुसारको तयारी गरिएको हो ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले औपचारिक निमन्त्रणा पठाएपछि मात्रै भ्रमणको टुंगो लाग्ने प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले जानकारी दिए ।भारतले आन्तरिक तयारी गरे पनि औपचारिक निमन्त्रणा भने अन्तिममा पठाउने प्रचलन छ । त्यसैकारण २० गते अघि नै सकेसम्म पार्टी एकता गरेर २३ गते जाने तयारी भएको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
दुवै कार्यदलले काम सकेर मस्यौदा अध्ययनसमेत अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेकाले पार्टी एकतामा विलम्ब गर्नुनहुने निचोड दुवै पार्टीको भएको र भ्रमण अगावै काम टुंग्याउन खोजिएको एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलको भनाइ थियो । भ्रमण अगावै पार्टी एकता गर्न सकिने गरी कार्यदलले काम टुंग्याइरहेको बताउँछन् पौडेल ।
दुवै कार्यदलले आफूले गर्नुपर्ने काम सकिसकेका र केही दिनभित्रै मस्यौदा बुझाउने तयारी गरेका पौडेलले बताए । भ्रमण अगावै एकता हुने पौडेल दाबी गर्छन् ।
माओवादी केन्द्रका नेता पोखरेलले पनि अहिलेसम्मको तयारी हेर्दा भ्रमणअगावै एकता सक्न कुनै कठिन नहुने बताए ।